Kenya oo sheegtay in mid ka mid ah raggii fuliyay weerarkii Kulbiyow uu ahaa Kenyan – STAR FM SOMALIA
Kenya oo sheegtay in mid ka mid ah raggii fuliyay weerarkii Kulbiyow uu ahaa Kenyan
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in mid ka mid ah raggii fuliyay weerarkii is qarxinta ee bishii hore Al-Shabaab ku qaadeen xero ciidan oo ku taal deegaanka Kulbiyow uu ahaa nin u dhashay dalka Kenya.
Warbaahinta Kenya ayaa soo bandhigtay magaca ninkan iyo sawirkiisa oo la sheegay inuu horay u ahaa nin heystay diinta Kirishtaan ah, kaddib qaatay Diinta islaamka.
Ninkan ayaa lagu magacaabaa Anwar Yogan Mwok, waxaa uu ku dhashay deegaanka Siaya sanadkii 1981, waxaana uu Al-Shabaab ku biiray sanadkii 2013.
Warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in ninkan uu ka mid ahaa dadka aadka loo doon doonayay oo ay baadigoobayeen Ciidamada ammaanka, waxaana madaxiisa la dul dhigay lacag gaareysa 2,milyan oo Kenya shiling ah.
Mid ka mid ah askartii ka bad baaday weerarkii Kulbiyow ayaa sheegay in boqolaal dagaalyahano ah oo isugu jiray Carab, Kenyan iyo tanzanian ay soo weerareen xerada, iyagoo adeegsanayay qaraxyo ismiidaamin.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka Kulbiyow ay kaga dileen ciidanka Kenya illaa 68 askari, halka dowladda kenya ay sheegtay in 9 askari lagaga dilay.
Ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda oo qaaday duulaan ku wajahan Degmada Xarardheere